Ny fahoriana mahazaka… manaraka | NewsMada
Ny fahoriana mahazaka… manaraka
Par Taratra sur 06/07/2019
Ny fahoriana, hono, mahazaka maniraka. Saingy tsy izay loatra ny resaka eto, fa ny fahoriana mahazaka manaraka. Nahoana? Manaraka na aiza na aiza, na rahoviana na rahoviana ny fahoriana, raha mbola tsy mahafa-bela: tsy misy na tsy itadiavana fanafany, ohatra, tsy hay na tsy hita sy tsy vita ihoarana…
Manaraka hatrany amin’ny fomba fijery sy fisaina ny fahoriana? “Raha ny tokony ho izy, tokony hieritreritra ihany ny olona rehefa mifidy”, hoy ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) izay ny amin’ireo depiote voafidy nefa mbola any am-pigadrana. Andrasana ny fitsarana…
Indraindray, ny mpifidy ny managadra tena amin’izay fidiny? Tsy ny amin’ireo olom-boafidy migadra ny resaka eto. Tsy mbola meloka fa miandry fitsarana izy ireo. Ny amin’ireo efa hita izao ny afitsony eo amin’ny tany ama-monina hatramin’izay, ohatra, nefa voafidy hatrany. Tsy mahita olon-kafa ny mpifidy?
Mety eo ihany izay hoe tsy mahita olon-kafa ny mpifidy izay, fa izay mahita azy ihany no hitany. Tsy inona fa izay mahavatra manipitsipy kely azy fanomezana sy fanampiana, mahajery azy mivantana any ifotony; eny, na manao fampanantenana lava tsy (ho) tanteraka izao aza: voafidy hatrany…
Nahoana àry no toa voafitaka na mety hofitahina lava toy izany ny vahoaka? Tsy mety ho tafapaka any ifotony tsinona ny hoe fampandrosoana. Izay mahita sy mahajery azy no hitany, jereny ihany koa. Na tsy mahavita taona aza ny karazana fanomezana sy fanampiana kely, fitaka sy fandrebirebena aza.
Rahoviana àry vao tena hisy ny fomba fijery lavitra eo amin’ny olom-pirenena any ifotony? Miainga amin’ny alalan’ny fifanarahana sosialy amin’ny alalan’ny fifidianana izany, fa haloan’ny vahoaka tokoa izay tsy mahatanteraka ny fanamby sy ny fampanantenany. Mba tsy hanaraka lava eny ny fahoriana.
Tsy izay ve ilay hoe fanovana ny fomba fanaovana politika? Miainga amin’ny faharesen-dahatra noho ny foto-kevitra, vinam-piarahamonina, paikady, olona iaraha-miasa… Tokony hieritreritra ihany ny rehetra ny amin’izany?